Encyclopedia ngwaahịa - Youxing Shark （Shanghai) Science & Technology Co., Ltd.
Esi echekwa gluu n'oge oyi?
Ekwesịrị ịchekwa gluu ahụ n'ime ụlọ akọrọ na jụụ dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na ọnọdụ adịghị na saịtị ahụ, a ga-ewere usoro nchekwa dịka snow, mmiri ozuzo, na anyanwụ nke ọma. Enwere ike izere ihe mkpuchi ahụ site na ikpuchi kwaaji n'oge nchekwa. Sealant okpomọkụ dị oke ala.
Kedu ihe kpatara akara gluu ọcha na akụkụ nke mbadamba?
1. Mgbe nkụkọ osisi nwere ntụpọ na nhazi izi ezi, ahịrị gluu a kpụrụ site na ijupụta akụkụ ntụpọ na splicing gluu.
2. Mgbe nrụgide nke igwe jigsaw ezughi oke ma ọ bụ na-enweghị isi, enwere ike ịpịpụta gluu nke jigsaw ahụ n'ụzọ zuru ezu site na roba ma ọ bụ ahịrị gluu, a na-amalitekwa eriri gluu ọcha na njigide gluu.
2. Gluing oge dị ogologo ma ọ bụ oge mmeghe mgbe gluing dị ogologo, na-akpata nsogbu akara gluu kpatara adhesion ụgha nke e guzobere site na nhazi nke gluu.
3. Ahịrị gluu na-acha ọcha nke e guzobere site na iji oge nke jigsaw gluu ma ọ bụ obere okpomọkụ nke osisi jigsaw ga-eme ka ihe nkedo kpoo ma banye n'ime ya nke ọma, na akwa gluu na-anọ.
Gịnị bụ ọkọlọtọ osisi mmiri ọdịnaya?
Mmiri mmiri bụ 8-12%. Njehie ọdịnaya nke osisi dị n'akụkụ otu ogwe osisi ahụ abụghị ihe karịrị +/- 1%, na ntụgharị nke ọdịnaya mmiri osisi na otu panel ahụ abụghị +/- 2%.
1. Ihe dị iche iche nke osisi (anisotropy) Mbelata / gbasaa ọnụego dị iche iche dị iche iche, na nrụgide a rụpụtara dị iche.
2. The bonding nke substrates dị iche iche mmiri ọdịnaya ga-eme ka ịdị elu dị iche nke interface (na nsọtụ nke kpọkọtara mbadamba na-ewekarị cracking)
Olee otú ime ka elu nke mkpụrụ ezigbo?
Osisi gluing osisi kwesịrị ịdị larịị, dị mma, enweghị mmanụ, ma ghara ịgbagọ; akụkụ abụọ dị n'akụkụ osisi jigsaw gluu kwesịrị n'akụkụ nkuku ziri ezi; njehie nhazi nke osisi gluing elu ekwesịghị ịdị elu karịa 0.1mm; mee ka osisi gluing elu ọhụrụ. Hazie mkpụrụ nwere ike kpọkọta n'ime 24 awa. 1. Ndị otu nọ n'ọrụ n’elu osisi ahụ; mmanụ / resin n'ime nkụ oozes; osisi deform n'okpuru omume nke mpụga ike. 2. Oge nchekwa nke ihe eji eme ihe na ogbako a toro oke, na uzuzu na ihe ndi ozo di mfe nfe n’elu uzo.
Gini mere eji kpalie gluu nke oma?
Ngwakọta agwakọta nke gluu na ndị na-agwọ ọrịa (na nlezianya dabere na akara ngosi nke ndị nrụpụta), ihe nkedo na ịgwọ ndị ọrụ ga-abụ nke a kpalitere n'ụzọ zuru oke. Emekarị electric akpali akpali bụ banyere 40 sekọnd, ntuziaka edemede bụ banyere 2 nkeji.
Gbado anya na ngwakọta zuru oke iji hụ na njikọta njikọta na nguzogide ihu igwe nke bọọdụ ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ dị mfe ịgbawa ma belata mgbochi mmiri nke bọọdụ a gbakọtara.
Kedu ihe kpatara ịgbawa bọọdụ ahụ?
Mgbe a na-etinye arịa ụlọ nke akpọnwụbeghị ma ọ bụ na-ezuteghị ihe dị mkpa nke ọkọlọtọ mmiri ahụ n'ime ahịa ma ọ bụ jiri ya n'ụlọ, ọ gaghị eguzogide ule nke mgbanwe ihu igwe, ọ dịkwa mfe ịmịpụta mkpịsị osisi, ịkụ (gluing), ihe owuwu rụrụ, na agba agba. Na onu nke oyi akwa nkewa, whitish agba na ebù. Mgbe etinyere mbadamba a gbakọtara maka oge ma ọ bụ mgbe ebe nchekwa ahụ gbanwere, ọ bụkwa otu n'ime isi ihe kpatara mmechi gluu nke njedebe nke bọọdụ ụfọdụ.
Kedu ihe kpatara gluu ji nwayọ nwayọ?
Mkpokọta ihe mkpuchi: Mkpokọ mkpuchi n'elu osisi glued kwesịrị ịbụ ọbụna (ihe nkedo glu bụ 0.2 mm), ọnụọgụ mkpuchi gluu na-abụkarị 250-300 g / m². Mgbe mgbe, mgbe gluu si na mmiri gluu n'okpuru nrụgide kwesịrị ekwesị bụ bead na-aga n'ihu ma ọ bụ eriri gluu dị mkpa, ọ pụtara na ọnụọgụ mkpuchi ahụ kwesịrị ekwesị. Ozugbo ego nke gluu ezughi oke, gluu ga-eji nwayọ nwayọ.
Kedu ihe kpatara gluu anaghị akpọnwụ?
Osisi nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ. Mkpụrụ ndụ nwere mgbidi cell na oghere oghere. Cavities niile nke sel nke osisi na capillaries dị na mgbidi ahụ na-etolite usoro okpu dị mgbagwoju anya. Mmiri na griiz n'ime osisi dị na capillaries ndị a. Ozugbo mmiri dị na osisi dị oke elu, ohere fọdụrụ maka gluu ka ọ banye n'ime sistemụ capillary ga-adị obere, na gluu na-ese n'elu mmiri nke osisi ahụ agaghị enwe ebe ọ ga-aga, na-ebute ihe omume nke na-enweghị ihicha. .
Kedu ihe kpatara eriri mama ojii?
Kedu ihe kpatara nsogbu ihu igwe na-adịghị mma nke arịa ụlọ na-agba agba?
Osisi eji eme ihe na arịa ụlọ emebeghị ọgwụgwọ na mmiri nkụ, ịda mbà na nkụsị-nkụ na mmiri siri ike nke osisi kwesịrị ka edozi. Mgbe plank kwesịrị ekwesị mere agadi maka ihe na-erughị otu ọnwa, mmiri mmiri nke osisi ahụ na-agbanwe nke ukwuu, nrụgide dị n'ime nke osisi ahụ dị elu. Tụkwasị na nke a, ezughị ezu njikọta nke jigsaw gluu na usoro ọrụ ezighi ezi ga-eme ka ihu igwe nke ngwaahịa a rụchara ghara ịdị ike.